လမ်းရေးအဖွဲ့ထလော့ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဟေ့ကောင်တွေ! ငါ့စာအုပ် တက် ဇန်နဝါရီလအပေါ်ထုတ်သည် 27 (လာမည့်အပတ်!) ငါသည်လည်းသင်တို့၏အကူအညီလိုအပျ.
သငျသညျမှာစာအုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုထွက်စစျဆေးနိုငျ ကို http://RiseBook.tv
My prayer is that God will take this book and use its message to challenge our generation to get up and live. တဖန်သင်တို့ကိုစာအုပ်အဘို့ငါတို့လမ်းရေးအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တက်လက်မှတ်ထိုးကသတင်းစကားဖြန့်ကိုကူညီနိုင်.
1 – Apply ဒီမှာ.
ကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုသိပါစေ, သငျသညျအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ချင်အဘယ်ကြောင့်, သငျတို့သလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ငါတို့နှင့်အတူအခြားအွန်လိုင်းလင့်ခ်ဝေမျှ.
2 – စာအုပ်တစ်ဦးကြိုတင်မဲမိတ္တူ Read.
သူတို့ကဖတ်မှသင်စာအုပ်တစ် PDF ကိုမိတ္တူပေးပို့ပါလိမ့်မယ်.
3 – ပုဂ္ဂလိကက Facebook Group ကို Join.
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ထုတ်ဝေသူကနေပုဂ္ဂလိကကို Facebook Group ကို join ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံယူပါလိမ့်မယ်. အဲဒီမှာ, သင်သည်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူမျှဝေဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာတစ်တန်ရလိမ့်မယ်. သငျသညျအကွောငျးကိုသိလိုပါလိမ့်မယ်သောလွှတ်ပေးရန်ပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ပျက်အချို့သောကြီးသောအမှုတို့ကိုရှိပါတယ်.
ငါအုပ်စုတွင်အကြိမ်အနည်းငယ် pop စေခြင်းငှါ, လွန်း!
4 – နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန့်နှံ့!
ငါတကယ်ဤသတင်းစကားကိုယုံကြည်နှင့်ကသူတို့ဘဝ၌ဘုရားသခငျရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှနိုးဖြစ်လာမှသငျနှငျ့အခွားသူမြားလာအောင်နှိုးဆွလိမ့်မည်ဆုတောင်းကြပါ. တစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုစတင်ကြပါစို့. ဒါဟာသင်နှင့်အတူစတင်နိုင်ပါသည်.
TaylorBradian • ဇန္နဝါရီလ 20, 2015 တွင် 10:16 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဖြစ်၏ 21 year old believer who isasingle father toabeautiful 16 month little girl. I also serve asabooking agent for artists in Christian Hip Hop. I’m alsoasenior, elementary education major (English), at Campbell University in North Carolina. ရိုးရိုးသားသား, the message of Christ hit me inawhole new way, years back when I was first introduced to Christian Hip Hop. The gospel was presented inaway where I could understand it, and share it with my friends. A couple of years back, we had the opportunity to bring Trip to my hometown of Sanford, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာ​​း, where he hadatour stop for his The Good Life Book Tour. It was awesome to see the response other people had, when they heard and understood the gospel for the first time. I would be thrilled to beafurther help in spreading the word about this new book from Trip. People need to hear the gospel in their own context so they can understand it. Just as Trip did in his debut book, I look forward to reading, reviewing, and sharing his practical and relate-able story with others. I was fortunate enough to receiveahope years back, that will last with me for eternity. I want others to find this same hope, and I remain confident that Trip clearly and concisely presents this hope in his new book. Thank you for your time in reading this, and I’m looking forward to helping further this message that we all so dearly need. Let’s RISE together!
ဒါဝိဒ်သည် • ဇန္နဝါရီလ 21, 2015 တွင် 10:22 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဝိဒ်သည် • မတ်လ 29, 2015 တွင် 5:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်